လက်ထောက်: Scheduler ကို & န်ထမ်း Planner က Shift | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Apps ကပ » လက်ထောက်: Shift Scheduler ကို & န်ထမ်းအစီအစဉျ
လက်ထောက်: Scheduler ကို & န်ထမ်း Planner က APK ကို Shift
လက်ထောက်တစ်ဦးဆန်းသစ်လုပ်သားစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပေး, အဆုံးစွန် Shift စီမံကိန်း & ဇယားသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို App ဖြစ်ပါတယ်။ 90,000 + နိုင်ငံများတွင်အခမဲ့! ကျော် 80 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ယနေ့စတင် Get သူတို့ရဲ့ထမ်းအချိန်ဇယားဆွဲဒုတိယ, အချိန် & တက်ရောက် tracker, အဖွဲ့တာဝန်စီမံခန့်ခွဲမှု, ရေးအဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်စီမံခန့်ခွဲမှုခိုလှုံပါ၏။
ပုံလက်ထောက် Business တယျ
◆ SMS ကို, အီးမေးလ်, နှင့်တွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာကနေတဆင့်သင့်ရဲ့အဖွဲ့စိတ်ကြိုက်ပြောင်းကုန်ပြီသတင်းအချက်အလက် Publish ။
◆လျင်မြန်စွာဝန်ထမ်း Shift Swap အတည်ပြုခြင်းနှင့်ဖြောင့်တစ်ဦးကမိုဘိုင်း device မှစက္ကန့်အတွင်း Drop Shift ။
, ထုတ်လွှင့်ကြေငြာတိကျတဲ့တစ်ဦးချင်းစီ / ဆိုင်းရန်တာဝန်များကို assign, သင်၏အသင်းကမမြင်စဖူးကြောင်းအတည်ပြုချက်ကိုရယူ: ◆တစ်နေရာတည်းတွင်အလွယ်တကူအဖွဲ့သည်ဆက်သွယ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရန်။
◆သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုမိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု Get နှင့်ဖယ်ရှားရာမှာဆုချီးမြှင့်စကားပြန်နှင့်မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှုနှင့်အတူလိုက်နာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်။
◆သငျသညျကိုအဆုံးသတ်-to-end မြင်သာပေးရန်သင့်ရှိပြီးသား apps များနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ။ လက်ထောက်လုပ်ခလစာပေးသူအပါအဝင်ထိုကဲ့သို့သောလူတွေလည်းရှိနေတယ်, ရင်ပြင်, QuickBooks, Xero, Gusto, အရောင်း, ဗျာဒိတ်ကျမ်းနှင့်ပိုပြီးအဖြစ်ကမ္ဘာ့လူသုံးအများဆုံးဖြေရှင်းချက်၏ 300 + ကျော်နှင့်အတူထပ်တူပြုပြီး။ အပြည့်အဝစာရင်း www.deputy.com/integrations တွေ့မြင်
◆အဖြစ်မကြာမီကထုတ်ဝေမယ့်အဖြစ်သင့်ရဲ့ device ပေါ်တွင်သင်၏ Shift လုပ်ငန်းခွင်ပြက္ခဒိန်ကိုရယူပါ။
◆နှင့် app ကိုမှအလျင်အမြန်အလုပ်ထဲကနာရီ။
◆, အရေးကြီးသောကုမ္ပဏီ updates များကိုကြည့်ရှုပါသင့်အလုပ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သင့်မိုဘိုင်း device မှသင့်ရဲ့အဖွဲ့နှငျ့ဆကျသှယျ။
သင့်လုပ်ငန်းကိုတက်ချိန်ညှိခြင်း◆? ယနေ့အခမဲ့အစမ်း sign up ပြုလုပ်ပါ။
အဘယ်သူမျှမဖွင့်တပ်ဆင်ကြေး။ နှစ်စဉ်လစဉ်, ဒါမှမဟုတ် flexi: သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုက်ညီဖို့အစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်ပါ။
အမြဲတမ်းသင်တို့သည်ငါတို့၏ Shift အစီအစဉျနှင့်အတူ rostered ညာဖက်ကလူသိရကြ၏: ​​လက်ထောက်သူတို့အလုပ်လုပ်နေသည့်အခါဝန်ထမ်းအကြောင်းကြားထို့နောက်မိနစ်အပြည့်အဝကုန်ကျထားသောအမည်စာရင်းကိုဖန်တီးရန်လွယ်ကူစေသည်။ လက်ထောက်ပင်အလိုအလြောကျလုပျ၏နံနက်ပိုင်းတွင်သူတို့ရဲ့ဆိုင်း၏ဝန်ထမ်းများကိုသတိပေးပါလိမ့်မယ်။
မရရှိနိုင်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးကအချိန်ဇယားဆွဲခြင်းမရှိစွန့်စားမှုရှိရဲ့ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အွန်လိုင်းအမည်စာရင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်ပြီးတော့တစ်ဦးအလယ်ပိုင်းတည်နေရာမှန်ထမ်း '' ခွင့်တောင်းဆိုမှုများသို့မဟုတ်အသုံးမပြုနိုင်သည့်စီမံခန့်ခွဲရန်။
ဝန်ထမ်းများအဆင့်ဆင့်တွေအကြောင်းစမတ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါသလား? လက်ထောက်သင်သည်ထိထိရောက်ရောက် rostering ဆိုတာသေချာအောင်သင့်ရဲ့ POS နှင့်လုပ်ခလစာသတင်းအချက်အလက်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး, သင်လိုအပ် (သို့မဟုတ်မလိုအပ်ပါဘူး) လျှင်သင်သိနိုင်အောင် Real-time ရာသီဥတုခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့အပိုဆိုင်း။
ဝန်ထမ်းအချိန်နာရီ (ကျွန်ုပ်တို့၏ဖယ်ရှားရာမှာမျက်နှာထောက်လှမ်းနည်းပညာကိုသုံးပြီးတက်ဘလက် Kiosk အထဲကနေလုပ်နိုင်သောသို့မဟုတ်) လျင်မြန်စွာအချိန်နှင့်တက်ရောက်သူကိုခြေရာခံရန်, GPS စနစ်က validation အပါအဝင်၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းအပေါ်တစ်ဦး Bundy နာရီနှင့်အတူလွယ်ကူသောလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ timesheets အပြီးသတ်နေသည်နှင့်လုပ်ခလစာမှတင်ပို့သင့်မိုဘိုင်းကိရိယာမှတဦးတည်းကလစ်နှင့်အတူလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
◆ရှိပြီးသားအသင်းချိတ်တွဲ? ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ် - ရုံလော့ဂ်။
လက်ထောက် APP ကိုအကြောင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထမ်းများ Scheduler app ကိုကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖို့အကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် features တွေပေးဆိုတာသေချာအောင်မှန်မှန် updated ဖြစ်ပါတယ်။ www.deputy.com မှာပိုမိုလေ့လာသင်ယူ
မဆိုတုံ့ပြန်ချက်? အကူအညီလိုတယ်? အီးမေးလ်ပို့ရန် android-support@deputy.com ကျနော်တို့ asap ပြန်သင်ရလိမ့်မည်! 🙂
ကျနော်တို့ဒုဝန်ကြီးရဲ့ app ကိုပိုကောင်းစေဆက်လက်လုပ်ဆောင်🚀
ဤသည်လွှတ်ပေးရန်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှု & ဘာဂ်ပါဝင်သည်🐞
မဆိုတုံ့ပြန်ချက်? အကူအညီလိုတယ်? 🤔
ကျနော်တို့ asap ပြန်သင်ရလိမ့်မည်! 🙂
လက်ထောက်: Shift Scheduler ကို & န်ထမ်းအစီအစဉျ
27.50 ကို MB
android ဖုန်း apk